Tag: helitaanka macaamiisha | Martech Zone
Cheetah Digital: Sida Loogu Hawl Galiyo Macaamiisha Dhaqaalaha Amaanada
Macaamiisha ayaa dhistay darbi ay iskaga difaacaan jilayaasha xun, waxayna sare u qaadeen heerarkooda calaamadaha ay lacagtooda ku qarashgareeyaan. Macaamiisha waxay rabaan inay wax ka iibsadaan magacyada aan muujineynin oo keliya mas'uuliyadda bulshada, laakiin sidoo kale dhageysta, codsada oggolaanshaha, tixgeliyana sirtooda si dhab ah Tani waa waxa loogu yeero dhaqaalaha aaminaada, waana wax ay tahay in dhammaan noocyada ay lahaadaan safka hore ee istiraatiijiyadooda. Qiimaha Isweydaarsiga Shakhsiyaadka la kulmay wax ka badan
Tilmaam: Falanqaynta Macaamiisha oo leh Fikrado Ficil Leh
Xog badan ma ahan wax ugub ku ah adduunka ganacsiga. Shirkadaha badankood waxay naftooda ka fikiraan sidii xog loo waday; hogaamiyaasha teknolojiyada waxay dejiyeen kaabayaasha aruurinta xogta, falanqeeyayaashu waxay kala sifeeyaan xogta, suuqleyda iyo maareeyayaasha wax soo saarkuna waxay isku dayaan inay wax ka bartaan xogta. In kasta oo ay uruurinayaan oo ay ka baaraandegayaan xog ka badan sidii hore, shirkadaha ayaa seegay aragtiyo qiimo leh oo ku saabsan wax soo saarkooda iyo macaamiishooda maxaa yeelay ma isticmaalayaan aaladaha saxda ah ee ay ku raacayaan adeegsadayaasha dhammaan safarka macaamiisha.
10 Faa'iidooyinka Barnaamijyada Daacadnimada & Abaalmarinta Macaamiisha
Jimco, Abriil 24, 2020 Jimco, Abriil 24, 2020 Douglas Karr
Mustaqbal dhaqaale oo aan la hubin, waxaa muhiim ah in ganacsiyada ay diiradda saaraan sii-haynta macaamiisha iyada oo loo marayo khibrad macmiil oo aan caadi ahayn iyo abaalmarinno daacadnimo ah. Waxaan la shaqeeyaa adeegga gudbinta cunnada ee gobolka iyo barnaamijka abaalmarinta ee ay soo saareen wuxuu sii wadaa inuu sii wado macaamiisha inay ku soo laabtaan marar badan. Istaatistikada Daacadnimada Macaamiisha Sida ku cad Khabiirka Cadaanka ah ee Khabiirka, Dhisida Daacadnimada Nooca Dunida Iskutallaabta: 34% dadka ku nool Mareykanka waxaa lagu qeexi karaa inay yihiin kuwo daacad u ah sumadda 80% kuwa daacadda u ah sumcadda ayaa sheeganaya inay
2019 Black Friday & Q4 Facebook Ad Playbook: Sida Fursad Loogu Helo Marka Kharashku Kordho
Talaado, Nofeembar 19, 2019 Axad, Abriil 26, 2020 Brian Bowman
Xilligii dukaamaysiga ciidaha ayaa inagu soo food leh. Xayeysiistayaasha, Q4 iyo gaar ahaan usbuuca ku xeeran Black Friday waa mid aan ka duwaneyn waqtiyada kale ee sanadka. Qiimaha xayeysiiska ayaa caadi ahaan kor u kaca 25% ama ka badan. Tartanka tayada alaabtu waa mid adag. Xayeysiiyeyaasha 'Ecommerce' ayaa maareynaya waqtigooda kor u kaca, halka xayeysiistayaasha kale - sida cayaaraha moobiilka iyo barnaamijyada - ay rajeynayaan in sanadka kaliya la xiro. Dabayaaqadii Q4 waa waqtiga ugu mashquulka badan sanadka
Arbacada, Maarso 6, 2019 Arbacada, Maarso 6, 2019 Ravi Chalaka
Suuqge khibrad leh ayaa fahamsan faa'iidooyinka ka soo baxa dhacdooyinka. Gaar ahaan, booska B2B, dhacdooyinka waxay dhaliyaan hogaamin ka badan dadaalada kale ee suuqgeynta. Nasiib darrose, hoggaamiyeyaasha badankood uma rogaan iib, taas oo caqabad uga dhigaysa suuqleyda inay kashifaan KPI-yada dheeraadka ah si loo caddeeyo qiimaha maalgashiga dhacdooyinka mustaqbalka. Halkii ay si buuxda diirada u saari lahaayeen hogaaminta, suuqleyda waxay u baahan yihiin inay tixgeliyaan cabbiraadaha sharxaya sida munaasabadda ay u heleen macaamiisha mustaqbalka, macaamiisha hadda, falanqeeyayaasha iyo